အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လာတော့မည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လာတော့မည်
အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လာတော့မည်
Posted by လင်းဝေ on May 18, 2012 in Business & Economics, Jobs & Careers | 11 comments
The presumption is that our oil and gas companies, our mining companies, our financial services companies are all now free to look for investments that can be mutually beneficial to Burma and to them.
ခွင့်ပေးလိုက်ပြီ ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီ လျှော့ပေးလိုက်ပြီ
ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ လောလောဆယ် စပြီး ဖြစ်လာနိုင်တာတွေက ခရတ်ဒစ်ကဒ်တွေ သုံးလို့ရလာတော့မှာပါ။
နောက်ပြီး အမေရိကန်တွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ရန်ကုန်ကို ရောက်လာတော့မယ်လို့ နားလည်မိပါတယ်။ အကျိုးအမြတ် စပြီးရှိမှာကတော့ All Nippon Airway (ANA) ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်သူများက US-Tokyo-Yangon လေယာဉ်ကို ဦးစားပေးသုံးကြမှာပဲလေ။ ဘန်ကောက်တစ်ဆင့်ကို သုံးချင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Now, these are important steps that will help bring the country into the global economy, spur broad-based economic development, and support ongoing reform.
We will be keeping relevant laws on the books as an insurance policy, but our goal and our commitment is to move as rapidly as we can to expand business and investment opportunities.
ဒီလိုမျိုး ချက်ချင်း ထပြီး အကျိုးပေးမယ့်သူတွေရှိသလို ဆက်ပြီး ကြီးထွားလာမယ့် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးနဲ့အတူ အားလုံး ကောင်းကျိုးတွေရကြပါစေ။ သို့သော် ကြိုးစားဖို့ တော့ လိုမယ်ပေါ့ဗျာ။ ပျင်းရင် ဖျင်းရင် အမေရိက မှာတောင် မွဲစုတ်တဲ့ ဘဝပဲရမှာဆိုတော့ ကိုယ်ကြိုးစားမှ ကိုယ်ရမှာတော့ ပြောစရာမလိုဘူးထင်ပါရဲ့။
မြန်မာပြည်တွင်းက လူငယ်တွေလည်း အင်္ဂလိပ်စာကို ထပ်ပြီးကျိုးစားရင်း လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ထားကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ အလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေအတွက် မြန်မာလူငယ်တွေဟာ သင့်တော်တယ်မြင်သွားမှသာ အလယ်အလတ် စီမံခန့်ခွဲသူများကို အခြားနိုင်ငံတွေက တင်သွင်းလာတာ ကို တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာဦးမယ်ဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အမှန်တကယ်အကျိုးရှိမယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဝင်လာပါစေ။ လူထုအများအစုအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါစေ။ ကောင်းမွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လုပ်ကိုင်ရင်း အဖွဲ့အစည်း စိတ်ဓါတ်၊ စည်းကမ်း နဲ့ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုတွေကို လူများစုကြီးက သင်ယူပြီး မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး တန်ဖိုးမြင့်လာပါစေ။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အထက်မှာပြောသလိုမျိုး ထပ်ပြောတာက
“ဒါ့ကြောင့်မို့ အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ကျွန်မ ပြောကြား လိုက် ပါတယ်။ အမေရိကန်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အထွေထွေခွင့်ပြုမိန့် တစ်ရပ် ကျွန်မတို့ ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ နိုင်ငံတကာငွေးကြေးဈေးကွက်တွေ၊ ဒေါ်လာအခြေပြု ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေကို ဆောင် ရွက်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ကြပါ၊ တာဝန်ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါ၊ ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကို ကိုယ်စားပြုပေးကြပါ၊ Good Corporate Citizen တွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးကြပါ၊ ကျွန်မတို့အားလုံး အတူတစ်ကွ လက်တွဲပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလုပ်အကိုင်တွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးကြပါစို့၊ မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ထောက်ပံ့ကူညီကြပါစို့ လို့ ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ”
Good Corporate Citize ဆိုတာ စောစော က ပြောတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကောင်းတွေက သင်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်းမွန်သော အခြေခံစိတ်ဓါတ် နဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေက မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ နိုင်ငံသားကောင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင်ကောင်း ဖြစ်စေမယ့် ကိစ္စကိုပြောတာပါ။
ကဲ …. အားလုံးကောင်းကြပါစေသား။
အလယ်အလတ် စီမံခန့်ခွဲသူများကို အခြားနိုင်ငံတွေက တင်သွင်းလာတာ
ဒီကနေစရအောင် ကိုလင်းဝေရေ …
မလောက်ရင်တော့ အင်ပို့ လုပ်ကြရမှာပါပဲ …
သီဟပူရ တီလုပ် မစ်ဒယ် မန်းနေ့ခ်ျမန့်တွေ အင်ပို့ လုပ်ကြမယ်ပေါ့ဗျာ …
အပြန်အလှန်ပေါ့နော ..ကိုယ့်ဆီက အင်ဂျင်နီယာ အမျိုးမျိုး
သူတို့ဆီကို အိပ်စပို့လုပ်နေတာ ကြာပီပဲဟာ …
အူးလေးပြောသလို အီးကို ပိုမိုနားလည်တတ်မြောက်အောင် လုပ်ထားရမယ်..
အလုပ်အကိုင်အတွက် အရည်အချင်း ပြည့်မီအောင် လုပ်ထားရမယ်..
မြန်မာ့အစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်းအောင် ပြရမယ်..
နေ့စဉ် တရုတ် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရုံးကန်နေရတာကို ပြောင်းလဲချင်သူတွေ တန်းစီနေပါပြီ။
“”ဒါ့ကြောင့် အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ကြပါ၊ တာဝန်ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါ၊
ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကို ကိုယ်စားပြုပေးကြပါ၊ Good Corporate Citizen တွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးကြပါ၊
ကျွန်မတို့အားလုံး အတူတစ်ကွ လက်တွဲပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလုပ်အကိုင်တွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးကြပါစို့၊ မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ထောက်ပံ့ကူညီကြပါစို့ လို့ ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ”
Good Corporate Citize ဆိုတာ စောစော က ပြောတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကောင်းတွေက သင်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်းမွန်သော
အခြေခံစိတ်ဓါတ် နဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေက မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ နိုင်ငံသားကောင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင်ကောင်း ဖြစ်စေမယ့်
ဒါလေးဖတ်ရတာကို သိပ်သဘောတွေ့ မိပါတယ်ဗျာ။
ဟူးဂိုးချာဗက်လား မောင်မောင်ဇာ လား
ကိုယ်က မလုပ်နိုင်ရင်တော့ သူများတွေဝင်လာမှာပေါ့။
အဲသလိုဖြစ်သွားရင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းသွားတဲ့အပြင် တိုးတက်ကြီးပွားရေးလမ်းစ future career path ပါပိတ်သွားနိုင်တာမို့ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ အင်ပို့လုပ်တာ နည်းစေချင်တာပါ။ ကိုယ့်လူတွေ ရနိုင်သမျှ ရပြီးမှ ပိုမှ လျှံမှ သူများတွေ ခေါ်သွင်းရတာကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ကိုယ့်လူတွေက ဒုံရင်းပဲကျန်နေမှာ စိုးရိမ်မိလို့ပါ မစ္စတာချာဗက်ဇ်ရယ်။
အဲ့သည့် မစ်ဒယ်လ် မန်းနေ့ခ်ျမန့်မှာလည်း
လုပ်သား လိုအပ်မှု (စီးပွားရေးတွေ များလာလေ ..) မလောက်မငှဖြစ်လာလေ
ဖြစ်မယ်ပဲ ထင်တယ်ဗျာ ..မှန်တာပြောရရင် စိတ်ပူပါတယ်….
သိတဲ့အတိုင်း exp ရှိပြီးသားတွေကျ ထွက်သွားကုန်ပြီ
လက်တလော က ကျောင်းဆင်း လောက်ပဲ ရနိုင်မှာ ဆိုတော့…
တင်သွင်းလာ လတ္တံ့သော ပေမီဒေါက်မီတွေကို ကျောင်းဆင်းတွေ မမီတဲ့အခါ…
ပိုလို့ ပိုလို့ ..အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပရီဖက်ရန်စ့် ကျဆင်းမှာ မဖြစ်စေလိုပါ
ထွက်ကုန်ကြတဲ့ လူတွေ ပြန်ဝင်လာလောက်တဲ့ မက်လုံးမျိုး မရှိရင်တော့…
ဆိုပြီး … စိတ်ပူမိရဲ့ဗျာ ….
ဆြာ middle management အကြောင်းလေး အားရင် ရေးပေးပါဦးဗျာ..
သည်လူတွေသာ pivot, သည်လူတွေသည်သာ engine
သည်လူတွေသည်သာ ကွင်းလည်ကစားသမားတွေလို့ ယုံတဲ့ ဂိုဏ်းထဲ
Hugo Chavez မဟုတ်တဲ့ …
လေကန် ဝေဖန်ချည်းပဲလုပ်နေသူများကတော့ ဒုံရင်းပဲကျန်ရစ်ခဲ့မှာ…
အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ မထားခဲ့ပဲ ရလာတဲ့ သင်ခန်းစာလေးယူပြီး
အနာဂါတ် ကို ကြိုဆိုကြပါစို့ရဲ့…။
မြန်မာလူမျိုးများ လည်ဖို့၊နပ်ဖို့ များစွာလိုအပ်ပါတယ်၊ မနုံအောင်၊မ အ အောင် လေ့လာမူများစွာလိုအပ်ပါမည်။ အခြေခံလူတန်းစားများ၊လူလပ်တန်းစားများ ကြိုးစားနိုင်တဲ့သူ၊အရေအချင်းရှိသူများ များစွာအောင်မြင်မူများရရှိနိုင်ပါမည်၊ ဘာသာစကား၊နားလည်တတ်ကျွမ်းမူများစွာလိုအပ်လာပါတော့မည်။
ကမ္ဘာနဲ့ရှင်ပြီး ယဉ်ဘောင်တန်းနိုင်အောင်မိမိတို့ဘက်မှလည်း လိုအပ်သော ၀မ်းစာများ များစွာစုဆောင်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
များသောအားဖြင့် မြန်မာပြည်ကလူတွေ မိသားစုလုပ်ငန်းတွေ၊ မိရိုးဖာလာ လုပ်ငန်းတွေလောက်သာ လုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ (ကိုယ်နဲ့နှိုင်းတာ)
လုပ်ငန်းကြီးလုပ်ဖို့ အသိပညာ ဗဟုသုတ ခေါင်းပါးလှပါတယ်။
နိုင်ငံတကာက ၀င်လာရင် (အသေးစား အလတ်စားဘ၀ကနေ ပြုတ်မသွားအောင်)
ကာကွယ်ခုခံနှိုင်စွမ်းအားရှိအောင် ၀မ်းစာစုဆောင်းထားဖို့ နိုင်ငံသားတွေကို
အခုကတည်းက သူ့အစုအဖွဲ့နဲ့သူ စုပေါင်းပြီး စည်းစနစ်တကျ ကြိုတင်လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်ကြဖို့၊ ကြိုးစားကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီနေရာမှာ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ဦးဆောင်သူတွေဟာ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိမှု၊့ ဥာဏ်အမျှော်အမြင်ကြီးမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု … တွေ (နာယကဂုဏ်နဲ့ ပြည့်စုံသူတွေဖြစ်ဖို့) အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
ထို့နည်းလည်းကကောင်း…. တွေနဲ့ပဲ ကြုံကြရပြီး အောက်တန်းနောက်ကျမြဲ ကျနေကြရဦးမှာပါပဲ။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာတာက ၀မ်းမြောက်စရာကြီးပါ..
good citizen တစိတ်တပိုင်းဖြစ်အောင်တော့..
အိပ်ငိုက်နေတဲ့ ဆရာသမားတွေကို ရေဖျန်း လန့် နိုးအောင်လုပ်ပြီး ဒီသတင်းဖတ်ခိုင်းကြပါ